သဘာဝနဲ့စိတ်နေစိတ်ထား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သဘာဝနဲ့စိတ်နေစိတ်ထား
Posted by tharli kar on Jun 4, 2012 in Copy/Paste | 14 comments
အသက်အရွယ်ရတာနဲ့အမျှ အိမ်ထောင်ပြုချင်စိတ်..၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်နှင့်…
တွေးကြ၊ ထင်ကြ၊ ပြောကြ၊ ဆိုကြတာတွေဟာ..ကျုပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက…
တိုင်းတာထားကြလို့ပါပဲ…။ အဲဒီမှာ..ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကို ပြောရရင်….
တကယ်ရော…မင်္ဂလာမဲ့သူဖြစ်သွားပြီလား…။ ဒါဆိုရင်…ထိမိ၊ ငြိမိတဲ့အပေါ်မှာ..
tharli kar ရေ … ဒီပို့စ်လေးဖတ်မိပြီး ပြုံးမိပါတယ် … ။
တခြားနိုင်ငံတွေမှာကတော့ .. ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဘာဖြစ်ဖြစ် …. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ဒီလောက်ကြီး မခံစားရပါဘူး … ။ ကိုယ်ချောလဲလျှင် ကိုယ်တိုင်ထမှသာ ရမှာပါ …. ကိုယ့်အားကိုယ့်ကိုး ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ရမယ့် အခြေနေမျိုးပါ … ။ လွတ်လပ်စွာ … ပြန်ထနိုင်ပါတယ် … ။
ယဉ်ကျေးမှုတွေ ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေနဲ့ ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ကျွန်မတို့လို့ နိုင်ငံမှာ …. ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အခမဲ့ ဝေဖန် ၊ ရှုံ့ချ ၊ အပြစ်တင်ပေးမဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လူအားကြီးတွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိတယ် ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ချောလဲလျှင်တောင် ၊ ဝိုင်းထူပေးဖို့ထက် …. အပြစ်တင်ဖို့ ..ပြောဆိုဖို့လောက်သာ … စောင့်နေကြတာ … ။ ဒီလို လူတွေကြားထဲ … ချောလဲသူတစ်ယောက် ပြန်ထဖို့ ဘယ်လို စိတ်ခွန်အားမျိုးတွေနဲ့ ကြိုးစားရမလဲ … တော်ရုံ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်သူတွေတောင် မလွယ်ပါဘူး ..
မိမိကိုယ်ကို ခံယူချက်ထက် …. ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေကို ပိုကြောက်ပြီးစိုးရိမ်နေရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးလေ …. ။
လူဆိုတာ အမှားနဲ့ မကင်းပါဘူး… ဒါကို ကျွန်မလက်ခံပါတယ် …. ။ ချော်လဲတဲ့ လူတိုင်း မထနိုင်လို့ … သူများ အနင်းခံရတော့အဖြစ်မျိုးတော့ … မဖြစ်စေချင်ဘူး … ။ ချော်လဲလျှင် ပြန်ထနိုင်ဖို့ အားတင်းသူတွေအတွက် .. အခွင့်ရေးမျိုး ရှိသင့်ပါတယ် … ။
ဒါကို .. အခုလို .. နိုင်ငံမှာ ဆီလို အပေါက်ရှာ ၊ ဝေဖန်ချင်သူတွေရှိနေတော့. ယိုင်နဲနဲ ့ထရမယ့် .. ချော်လဲသူတွေ …. ခြေမခိုင်နိုင်တော့ပဲ … ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခြင်းဆိုတဲ့ … လမ်းကို ရွေးကြတာများတယ် … ။ ပြောရလျှင်လေ .. အမှားလုပ်တဲ့ လူတွေ … သတ်သေဖို့ထက် ..ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ၊ အတင်းပြောတတ်တဲ့ လူတွေ သတ်သေဖို့ ကောင်းတယ် … ။
အမှားလုပ်တာကို နားလည်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် …. အမှားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ သူတပါးကို ဒုက္ခပေးဖို့ဆိုတဲ့ ခပ်ညံ့ညံ့ အတွေးမျိုးကပ်လာလျှင်တော့ .. လူစိတ်မရှိသူအဖြစ်နဲ့ … ရှုံ ့ချမိမှာပါပဲ … ။ ဒုက္ခပေးဖို့ သက်သက်ရည်ရွယ်ပြီး အမှားလုပ်သူများကိုတော့ …. ရင်ထဲ ၊ အသည်းထဲကနေ .. စူးစူးနှစ်နှစ် ရွံရှာမိပါတယ်
ထိမိ၊ ငြိမိတဲ့အပေါ်မှာ.. ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့…ဆက်လက်ခရီးသွားသင့်သလဲ… ဆိုတာလေ .. ပြောဖို့ .. ကျန်သွားတယ် … ။
ကျွန်မ အမြင်ကတော့လေ …. ချီးမွမ်းခုနစ်ရက် ကဲ့ရဲ ့ခုနစ်ရက်ဆိုတဲ့ ထုံး … နှလုံးမူပြီး သွားပါလို့ပဲ .. အကြံပေးချင်ပါတယ် … ။ လူမှာ စိတ်ဓါတ်က အရေးကြီးဆုုံးပါ …. ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံကြားမှာ မိမိကိုယ်ကို … ရေစုန်မျောလိုက်လျှင်တော့ … လုံးဝကို ဘဝပျက်ကိန်းမို့ …. ချော်လဲလျှင် ပြန်ထဖို့ … အားတင်းပါလို့ပဲ .. အကြံပေးချင်ပါတော့တယ် … ။
ဒေါ်အိတုံရဲ့ပြောချက်က ကျေနပ်စရာပါ။ ဒါပေမယ့်..မကျေနပ်သံလေးများနှောနေသလားလို့။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ အကောင်းမြင်အသိနဲ့ အများအကျိုးကို ခုလိုဝင်ရောက်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးဆောင်ပေးတာကိုပဲ..ဒေါ်တုံ့ကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
tharli kar ရေ … မကျေနပ်ချက်တွေအပြင် ၊ နာကျဉ်းချက်တွေပါ ရောပြီး ဒီကော့မန့်ကိုရေးခဲ့တာ ဝန်ခံပါတယ် ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကိုုက … ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်နဲ့ ၊ သွားပုတ်လေလွင့်ပြောဆိုဒဏ်ကို ကောင်းကောင်းကြီး ခံခဲ့ရဖူးလို့ပါပဲ … ။
ကိုယ်ခေါင်းလျှင်ခေါင်းမရွှေ့ပါဘူးဆိုတဲ့ … ယုံကြည်ချက်နဲ့ … မလိုသူတွေရဲ့ အတင်းဖျင်း၊အပြောကြား မယိုင်လဲသွားအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေကို … ပြန်သတိရမိလိုက်လို့ပါပဲ …. ။
ဒု သ န သော မဖြစ်ရင်ပြီးတာပါဘဲ။ ကျန်တာကတော့ ကိုယ်ပိုင်ဆင်ခြင်ဉာဏ်နဲ့ ထိန်းပေါ့။
ရွှေအိလည်း ခေသူတော့မဟုတ်ဘူး။ သက်ဆိုင်သူများအားလုံးအတွက် ကျေးဇူးပါ။
tharli kar ရေ အိတုံပြောသလို အမလည်းထောက်ခံတယ် …….. အမတစ်ခုလောက်ဆွေးနွေးမယ်နော် မြန်မာမိန်းကလေးတွေက အပျိုစင်ဘဝကို လက်မထပ်ခင်မှာထိန်းသိမ်းမှ တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ အများအားဖြင့် ယူဆထားကြပါတယ် ကိုယ်မကောင်းတာလုပ်ရင် ကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်မလုံတာတော့ အမှန်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ဒါပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲချော်လဲသွားပေမယ့် ပြန်ထဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ် နောက်ထပ်လက်တွဲမယ့် သူကို မိမိအကြောင်းတွေ အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောလိုက်ပါ အချစ်စစ်ရင်လက်ခံပါလိမ့်မယ်
တစ်ချို့မုဆိုးမတွေ တခုလပ်တွေဆို နောက်အိမ်ထောင်ဘယ်လိုပြုတော့မလဲ မကောင်းတဲ့နေရာမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု နေတဲ့မိန်းကလေးတွေဆို လင်ကောင်းသားကောင်းတွေရနေတာတွေအများကြီးပါ …… သူတို့တွေလည်း မှားခဲ့ကြသူတွေလေ ဒါလေးကို ဖြည့်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ ……..
တစ်ခုတော့ရှိတာပေ့ါနော် မထင်မှတ်ပဲဖြစ်သွားတာတဲ့ထိမိငြိမိခြင်းက ဖြေသိမ့်လိုက်ပါကွယ် တမင်သက်သက်ကြီး လွယ်လွယ်ထိမိငြိမိတာမျိုး အခါခါမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကွယ် ……..
မိန်းခလေးထုထဲမှာ..ဒီလောက်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိနေတာကို…ခုခေတ်မိန်းခလေးများ သိစေဖို့အခုလို ဝင်ရောက်အကြံပေးတဲ့ မမခိုင်ခိုင်ကို သာလိကာ ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။
ဆင်ခြင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပါဘဲဗျာ။ဒါပေမယ့်လဲ အမိုက်အမှောင် တဏှာလောကကိုတော့
သဘာဝ ဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်တယ်
စိတ် ဆိုတာကလည်း ဆန်းကြယ်တယ် …
တဏှာ ရာဂရဲ့ သဘောကတော့ မဆန်းကြယ်ဘူး ..
ထိမိ၊ ငြိမိတဲ့အပေါ် ဘယ်လို စိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ ဆက်သွားသင့်လဲဆိုတော့ ..
ဘုရားတောင် ငယ်ဖြူဘုရား မရှိဘူး ..
ငါတို့က ပုထုဇဉ် လူသားတွေပဲ မှားတတ်ကြမှာပေါ့ … လို့ပဲ
ဘာမဆိုင်၊ ညာမဆိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်း ခရီးဆက်ပေါ့ဗျာ …
ဖတ်ရင်းနဲ ့၊ စာထဲရေးထားတာကို ကျုပ်သဘောပေါက်မိတာ တစ်ခုကတော့
မိန်းခေးတွေ ရည်းစားထားလို ့…
ရည်းစားနဲ ့လွန်ကျူးမိတာမျိုး ရှိရင် ရှိမယ်
အဲဒါ ရှက်စရာ ဘဝပျက်စရာ မဟုတ်ဘူးလို ့ပြောချင်တာ မှတ်တယ်
ဟုတ်တယ်ကိုပေရေ။ အဲသလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူး၊ ကြုံခဲ့ဘူးတာများရှိရင်…စိတ်ဓါတ်မကျဖို့ရယ်… ပြီးတော့ထင်ရာစိုင်းဖို့ပြင်နေကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း…သတိပေးချင်တာရယ်ကတော့ တင်ပြချင်တဲ့ အဓိကအချက်တွေပါပဲ။
ကျွန်တော်လဲ ဖတ်ပြီး ကိုမောင်ပေနားလည်သလိုပဲ နားလည်လိုက်တယ်။ အဲဒီအဓိပ္ပါယ် ဆိုရင်တော.မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ် မှားခဲ.တဲ.အမှားကို ရဲရဲ ရင်ဆိုင်ပြီး အမှားတူမျိုး ထပ်မမှားအောင် သတိထားရမှာပေါ.နော်။ မှားတတ်ကြတာပဲဗျ။ သတ်သေရလောက်တဲ.အပြစ်မဟုတ်ပေမယ်. ဘာအပြစ်မှမဟုတ်ဖူး၊ ရှက်စရာမဟုတ်ဖူး ဆိုတဲ.အသိမျိုး မြင်သွားရင်တော. မကောင်းဘူးပေါ.ဗျာ။
Ma etone ,
Great ! ( raised five fingers )